Fanondroana Keyword Keyword amin'ny isa maimaim-poana
Manaraka ireo fiovan'ny SEO amin'ny alàlan'ny telefaona
Alahady, Jolay 11, 2010 Talata, Desambra 18, 2012 Douglas Karr
Faly izahay fa hanana mpanjifa vaovao amin'ity volana ity izay manao marketing be dia be amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana. Miaraka amin'ny radio, fahitalavitra ary mailaka mivantana, ny fomba mahazatra amin'ny fanarahana fanentanana dia amin'ny alàlan'ny fanolorana kaody coupon na kaody fihenam-bidy izay mifandray mivantana amin'ny tolotra.
Na izany aza, miaraka amin'ireo orinasa manana departemantan'ny telemarketing miditra, ny fomba voalohany ampiasaina dia ny mividy banky nomeraon-telefaona tsy misy tol ary ampiasao laharana telefaona isan-karazany isaky ny fampielezan-kevitra. Ny fandinihana natao tato ho ato dia nampiseho fa isan-jaton'ny mpitsidika an-jatony no hiantso fa tsy hifandray amin'ny orinasa amin'ny alàlan'ny endrika na mailaka (40% amin'ny karoka eo an-toerana).
Manana mpanjifa tranonkala lehibe ity mpanjifa ity ary efa nampitombo ny fitsidihanay ny tranonkalany ho an'ny teny tokana 15% ao anatin'ny 30 andro. Ny fitomboan'ny fitsidihana dia mahafinaritra, saingy mila mahay mamantatra ny fifamoivoizana amin'ny tena fanovana isika. Tokony ho tsapan'ny mpanjifanay fa ny fandaniana amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana dia manampy dolara amin'ny farany ambany. Ny vahaolana dia ny manambady ireo metodolojika roa… ny fanatsarana ny motera fikarohana natao manokana isa tsy misy tol.
Tags: fanaraha-maso antsoantsonomeraon-telefaona mihetsikafanaraha-maso findayfikarohana OptimizationSEO
Misaotra anao Blogger! Hetsika fitarainana DMCA
Manorena fahatokisana amin'ny filazanao hoe TSIA!
Jul 12, 2010 amin'ny 8: 11 AM
Doug, fantatro ny orinasa iray izay manana nomeraon-telefaonina tokana nefa manampy tsotra "Angataho i Amy" na "Angataho i Jim" amin'ny fandefasana laharan-telefaona maimaim-poana. Tsy misy Amy na Jim ao amin'ny orinasa fa rehefa mamaly izy ireo dia mihaino fotsiny izay anarana angatahin'ny olona dia avy eo milaza fa tsy eto izy amin'izao fotoana izao fa afaka manampy anao aho. Mazava ho azy fa io anarana io no mamaritra hoe iza amin'ireo fampielezan-kevitra no mamaly.
Toy izany koa no miasa amin'ny fanitarana sandoka. Antsoy ny 800-555-5555 x3542. Tsy misy fanitarana 3542 fa milaza aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao.
Jul 12, 2010 amin'ny 10: 34 AM
Nanao toy izany koa izahay taloha tamin'ny Direct Mail, Patric! Nanao sonia tamin'ny anarana sy anaram-boninahitra sandoka ireo taratasy izahay – avy eo dia ampiasao izany hanaraha-maso ny fampielezan-kevitra sy ny tolotra. Amin'izao andron'ny mangarahara takina izao, azoko antoka fa tsy ho ankasitrahana loatra ny fanao mahazatra ankehitriny.
Jul 14, 2010 amin'ny 10: 33 AM
Lahatsoratra tsara Doug. Nampiasa fiovaovana amin'ity fomba ity izahay: http://www.seoverflow.com/blog/call-tracking/roll-your-own-phone-call-tracking-program-it-is-easy/
mandritra ny fotoana fohy. Tetika tsara izany ary manampy amin'ny fanaporofoana ny lanjanao amin'ny mpanjifa mora kokoa. Mendrika ny hijery an'io script io sy Twilio ho an'ireo izay mampiasa azy irery.